के राति सुत्दा मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ? सावधान! हुनसक्छ यस्तो बिमारीको संकेत! |
के राति सुत्दा मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ? सावधान! हुनसक्छ यस्तो बिमारीको संकेत!
November 4, 2021 adminLeaveaComment on के राति सुत्दा मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ? सावधान! हुनसक्छ यस्तो बिमारीको संकेत!
लक्ष्मीपूजाको दिन दिदीभाई सवार स्कुटर दुर्घटना हुँदा भाईको निधन दिदी गम्भिर घाइते। अधुरै रह्यो भाईटिका लगाइदिने धोको
तपाइको अनुहारमा चाउरीपना छ?अनुहारको चाउरीपन हटाउन यी घरेलु उपाय अपनाऊनुहोस
सेलरोटीपछि भात खाने गर्नुभएको छ?दशैंको बेला यो सामान्य हो तर यस्ता रोग भएकाहरुको ज्यान समेत जान सक्छ।ढिला नहुँदै अमुल्य ज्यान खेर हुन बाट समयमै जान्नुहोस
सामान्य यस्ता संकेतले निम्त्याउछ महिलालाइ क्यान्सरको उच्च जोखिम।कस्ता हुन्छन ति थाहा नहुने संकेत,समयमै जन्नुहोस(भिडियोसहित)